Omenala zuru oke zuru oke matara akwa na onye na-emeputa igbe Rayson
Rayson na Rayson Mpaghara, Huasha Road, Shashan, Foshan High South Mpaghara, Guangdong, China. Isi ngwaahịa ndị ọkachamara na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa na-achagharị na mpụga ndị na-emepụta mmiri. Oké ọnụ na-eme ka ọ dị elu na-acha uhie uhie na-enweghị atụ na ya, ndị Rayson na-ewu ewu n'etiti ndị ahịa. Mgbe ị na-eyi ngwaahịa dị mma a, oke ma ọ bụ okwu zuru oke nke ga-eme ka mmadụ nwee ntụkwasị obi. Oké ọnụ na-acha uhie uhie nwere peculiarities nke, nke a na-eji.
Mgbe ọtụtụ afọ nke siri ike na ngwa ngwa, Rayson etoola n'otu n'ime ndị ọrụ kachasị aka na ndị ọrụ na China. Nnukwu ohiri isi zuru oke na igbe anyị na-etinye ego na ngwaahịa na ngwaahịa R & D, nke na-eme ka ọ dị mma nke anyị matarasị matrad na igbe. N'ịdabere na ndị ọrụ na-arụ ọrụ na ndị ọrụ anyị, anyị na-ekwe nkwa na anyị na-enye ndị ahịa ngwaahịa kachasị mma, ọnụahịa kachasị mma, na ọrụ kachasị mma. Nnabata ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla .Ọ na-enye oke na mmetụta ederede maka ndị na-eyi ya. Ndị mmadụ ga-adị mma mgbe ha na-ejide ya ma nwee ntụsara ahụ mgbe ọ na-eyi.
Anyị na-ekwe nkwa na ezigara ndị ahịa na nchekwa na ụda. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ chọọ ịmatakwu banyere anyị, kpọọ anyị ozugbo.
Ndị ahịa chọrọ ịmatakwu banyere ngwaahịa ọhụrụ anyị ma ọ bụ ụlọ ọrụ anyị, kpọtụrụ anyị.
Anyị na-agbaso usoro nchịkwa Standard dị mma iji hụ na ngwaahịa anyị zutere ma ọ bụ gafere ndị ahịa anyị. Na mgbakwunye, anyị na-enye ọrụ ahịa maka ndị ahịa niile n'ụwa niile.
Kedu usoro ịkwụ ụgwọ ị na-anabata?
LC na anya / site na tt, 30% ego na 70% nguzozi na-emegide akwụkwọ mbupu Winin 7.
Can nwere ike inyere m aka ịme atụmatụ nke anyị ma ọ bụ jiri akara m na ngwaahịa a?
Anyị nwere ike ime matraasi ahụ dịka imewe gị ma ọ bụ nye ọrụ OM chọrọ ka ị nye anyị ihe osise gị ma ọ bụ Logo foto.
Etu esi ewepu m matra anya?
1. Ebe a na-edebe ihe dị na ya dị larịị na ime ụlọ gị, jiri nwayọ dọta mado ma tinye ya n'elu akwa gị. 2.Cee nke a na-egbutu akpa ahụ na mkpa iji jide n'aka na ị gaghị egbutu plastik n'ime ma ọ bụ matraasi, adala mma mma. 3. Hapụ matrat-a matrasị na akwa gị n'elu akwa gị. 5.Low 24 awa maka matraasi ọhụrụ gị iji gbasaa.